पाँडे सक्किगोनीमा नआउनुको कारण यस्तो : सक्किगोनी छोडेकै हुन त? पूरा पढ्नुस… - खबरदार न्युज
चर्चित हास्य टेलि शृङ्खला सक्किगोनी नेपालको नं. एक कमेडी सिरियल हो भन्दा फरक नपर्ला। पाँडे, जिग्री, बले, कक्रोच, खुपिका बाउ, काकु, एदुमे, रक्षा, मुन्नी, सिते बा, जयन्ते, रामभजन, जस्ता सक्किगोनिका पात्रहरुले गर्दा सक्किगोनी यो स्थानमा पुगेको हो।
यसैबीच पछिल्लो केही साता यता शृङ्खला का मुख्य पात्र अर्जुन घिमिरे पाँडेको अनुपस्थित देखिएको छ। पाँडे पात्र नहुदा सिरियल खल्लो भएको भन्दै पाँडेलाइ पनि सिरियलमा ल्याउनुपर्ने दर्शकहरुको माग छ।
युटुबमा आएको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने अधिकांस प्रतिक्रिया पाँडेको नामामा हुन्छन।
आखिर पाँडे किन सिरियलमा देखिएका छैनन त? के पाँडेले सक्किगोनी छोडेका हुन त?
यी तमाम प्रश्न उठिरहेका छन। खासमा अर्जुन घिमिरे अहिले आफ्नो व्याक्तिगत कामामा व्यस्त भएको कारण उनी सिरियलमा देखिन नपाएका हुन। मिडिया हब संगको बिबाद पछि पाँडे जिग्री मिलेर आफ्नै क्रीयसनमा उक्त शृङ्खला सुरुवात गरेका थिए।
तसर्थ पनि पाँडेले सक्किगोनी छोड्ने कुरै हुदैन। पाँडे छ्न र त सक्किगोनी छ अनि सक्किगोनी छ र त पाँडे छन होइन र?
जे होस अबको शृङ्खला मा उहाँलाइ चाँडै देख्न पाइयोस।
साथै उपचाररत उहाँको आमाको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना।
सक्किगोनि सुरुवात ताकाको समाचार:-
Previous post बिस्नु माझिले पहिलो पटक मुख खोलिन – श्रीमानले बन्धक बनाएको बिषयमा यस्तो खुलाशा !
Next post धनगढीमा स्यानिटाइजर पिउँदा केे भयाे ?
Previous post:बिस्नु माझिले पहिलो पटक मुख खोलिन – श्रीमानले बन्धक बनाएको बिषयमा यस्तो खुलाशा !
Next post:धनगढीमा स्यानिटाइजर पिउँदा केे भयाे ?